Chinese Ozizi Day-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Daybọchị Ndị Nkụzi China
Oge: 2020-08-27 Hits: 28
Teacherbọchị ndị nkuzi, naanị mmetụta nke ememme a bụ agụụ. Ndị na-enye anyị ihe ọmụma ma na-eduzi anyị ka anyị tolite na-aghọ ubube na ndụ onye ọ bụla, otu na otu.
Na oge mgbụsị akwụkwọ ọlaedo nke Septemba, osmanthus na-esi ísì ụtọ, ifufe dị nro na-eziga jụụ, na onye na-elekọta ubi siri ike na-asa ahụ n'ebube nke ọrụ ahụ wetara. Na Septemba 10, ụbọchị “Onye Ozizi” dara ụda, “Onye Ozizi, ị rụsiri ọrụ ike!” Ekele sitere n'obi na-eme ka atụ anya ihe niile; “Onye Ozizi, ezumike!” Ahịrịre nke ngọzi ịhụnanya nwere ọtụtụ ihe na-aba uru! Olu siri ike nke oge a na-akụkarị atrium nke onye na-ezisa ozi ọma, nkwanye ùgwù maka onye nkụzi abụrụla ihe ejiji. Sayensị na agụmakwụkwọ na-eme ka mba ahụ dị ọhụrụ ma na-esi isi ụtọ. Onye nkụzi ahụ dị ka onye ọrụ ugbo nke kpasuru nkata. Oké owuwe ihe ubi ahụ agbadawo ọkpụkpụ azụ ma dere obi ụtọ na ihu.
Mana ekwenyere m na ndị nkuzi bụ nna ukwu ime mmụọ na-akwado mgbasa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ha na-eji ubu ha na-esighi ike mee ka olileanya nke ọganihu mba wee gbasaa ike nke ọganihu mmekọrịta mmadụ na ibe ya: teknụzụ, echiche, nkwenye! Maka agụmakwụkwọ, Ha na-arụsi ọrụ ike ma na-a inụbiga mmanya ókè, iji zụlite ogidi, ha adịghị ehi ụra, na-atụgharị uche, ma na-ekwesi olu ike. Site na nwata rue okenye, site na obi ọmịiko ma ọ lara ezumike nká, abalị ole na-abata? Kedu ọsụsọ dị na klaasị? Ndi na-eduga ụmụ akwụkwọ ịrịgo Templelọ Nsọ nke Akwụkwọ nke Chineke ma fekwasị ikuku na ebili mmiri ịmụ oke osimiri.
Otu ntapu mmiri puru igosiputa ncha anyanwu, otutu mmiri nke nkwalite na-abanye kwa oke amamihe. Ndị injinia mkpụrụ obi na-ebido mgbe mgbe site na ntakịrị ntakịrị, na-eji obi na ọsụsọ jigide anyanwụ nke echi!
Previous: Daybọchị Ndị Nkụzi China
Ọzọ: Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival